Maungtintyin: The feminine ကို လက်ခံခွင့်ပြုပါ
အလင်းရောင်ဟာ နေရဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ လှိုင်းလုံးဟာ ပင်လယ်ရဲ့ သဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အေးမြခြင်းဟာ လေရဲ့သဘာဝ ဖြစ်ပါတယ်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုနှင့် သမင်တစ်ကောင်၊ ပြီးတော့ ရန်လိုမှုနှင့် ခြင်္သေ့တစ်ကောင် ဒီလက္ခဏာသွင်ပြင်တွေနဲ့ ပြည့်စုံစေတဲ့အရာများဟာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် မူရင်းသဘာဝများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများမှာ တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်းထံမှ သူတို့ကို ခွဲခြားသိမြင်စေတဲ့ တစ်မူတစ်ဘာသာထူးတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သဘာဝများ ရှိကြပါတယ်။
တစ်ကြိမ်တုန်းက လင်းယုန်ငှက်ငယ်တစ်ကောင်ဟာ ကြက်ကလေးငယ်တစ်အုပ်ကြားထဲမှာ နေထိုင်နေခြင်းဖြင့် သူ့ကိုယ်ကို ပုံသွန်းပါတယ်။ ကြက်မိခင်ဟာ သူမက သူမရဲ့သားသမီးငယ်တွေကို ကျွေးမွေးပြုစုကြည့်ရှု့ စောင့်ရှောက်တဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း အဲဒီလင်းယုန်ငှက်ငယ်ကို ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။ ကြက်ကလေးများလို ငယ်ရွယ်တဲ့လင်းယုန်လေးဟာ တီကောင် သန်ကောင်များကို မြေပေါ်မှာ လိုက်ရှာခြင်းဖြင့် ရှင်သန်ကြီးထွားလာပါတယ်။ သို့ဖြစ်- လင်းယုန်ငှက်ငယ်လေးဟာ သူ့ကိုယ်သူ ကြက်ငယ်လေးတစ်ကောင်မျှသာ ဖြစ်တယ်လို့ တွေးထင်နေပါတော့တယ်။ လေထဲသို့ ထိုးတက်ဖို့ ပျံသန်းဖို့ သူ့ရဲ့အစွမ်းအစကို သိနားလည်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
တစ်နေ့မှာတော့ အခြားလင်းယုန်ငှက်တစ်ကောင်က ကြက်ကလေးများနဲ့အတူ အပျံသင်စ အဲဒီလင်းယုန်ငှက်ငယ်ကို သတိထားမိပါတယ်။ လင်းယုန်ငှက်ငယ်တစ်ကောင်းတည်းရှိတဲ့အခါ “ကောင်းကင်လင်းယုန်ငှက်”ဟာ “ကြက်လင်းယုန်ငယ်”ဆီ ချဉ်းကပ်ပြီး ရေကန်တစ်ခုသို့ လင်းယုန်ငယ်ကို သယ်ဆောင်လာပါတယ်။ ကောင်းကင်လင်းယုန်ငှက်-က “ တို့ရဲ့ ကလေးငယ်! မင်းဟာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ မသိလေရော သလား? ဒီမှာ ငါ့ကို ကြည့်ပါ။ ပြီးတော့ ခု ရေထဲမှာ မင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံရိပ်ကို ကြည့်ပါ။ ငါ့လိုပဲ၊ မင်းဟာလည်း ကောင်းကင်ထဲမှာ တဟုန်ထိုးပျံသန်းတက်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိတဲ့ လင်းယုန်ငှက်ငယ်တစ်ကောင်း ဖြစ်တယ်။ မြေကြီးမှ ဘယ်မှ ထလို့ထွက်လို့မရတဲ့ ကြက်ငယ်တစ်ကောင်လို့ မဟုတ်ဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လင်းယုန်ငယ်ဟာ သူ့ရဲ့ခွန်အားစွမ်းပကားကို သဘောပေါက်လာပါတယ်။ ပြီးနောက် တုံ့ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ သူ့ရဲ့အတောင်ပံတွေကို ဖြန့်ကားလျက် ကောင်းကင်ထဲသို့ တဟုန်ထိုး ပျံသန်းသွားပါတော့တယ်။ ကျယ်ပြောလှတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးဟာ လင်းယုန်ငှက်ငယ်အတွက် မွေးရာပါအခွင့်အရေး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနည်းတူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာ စွမ်းရည်အင်အားနဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက် အဆုံးအစမရှိတဲ့ ကောင်းကင်ထဲသို့ မားမားစွင့်စွင့် တိုးဝင်ပျံသန်းဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလွတ်လပ်မှုဟာ လက်တွေ့တစ်ခု ဖြစ်လာခြင်းမတိုင်မီ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အတွက် တည်ငြိမ်တဲ့ အားထုတ်ကြိုးစားမှုမှတဆင့် သူမကိုယ်တိုင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါ့မယ်။ ဒါက - သူမဟာ သြဇာပါဝါမှကင်းမဲ့တယ်- ပြီးတော့ သူမကို တားမြစ်ဟန့်တားထားတဲ့ များစွာသော အကန့်အသတ်များနဲ့ အားနည်းချက်များက သူမကို ကုန်းနှီးတင်ထားတယ် - ဆိုတဲ့အတွေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ပထမဆုံး ဒီအတွေးများကို ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းပစ်ရပါ့မယ်။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ ပင်ကိုယ်လက္ခဏာဟာ သူမရဲ့ မိခင်ပမာဆန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ- အသနားအကြင်နာ- သည်းခံနိုင်မှုစွမ်းရည်- တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်မှုတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူမဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ဖြစ် ဒီအရည်အသွေးတွေကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ စိတ်ကူးမ၀င်သင့်ပါ။ အမျိုးသမီးများဟာ သူတို့ရဲ့ အမျိုးသမီးဆန်တဲ့အရည်အသွေးတွေကို ငြင်းပယ်တယ်ဆိုလျင် ဒါဟာ လောလောဆယ် ကမ္ဘာမှာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ တစ်ဖက်စောင်းနင်းမညီမျှမှုတွေကို ထပ်ဖြည့်ခြင်း တိုးချဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လာမယ့်ခေတ်ကို The healing power of motherhood အတွက် ပြန်လည်ရှင်သန်နိုးကြားစေဖို့ နှစ်မြှုပ် ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ညီညွတ်မှုဆိုင်ရာ အကျွန်ုပ်တို့အိမ်မက်ကို ပြီးမြောက်စေဖို့ ခရီးလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ပြီးတော့ အမျိုးသားတစ်ဦးက အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဆက်စပ်တည်မှီနေဖို့ ဖြစ်တယ်- ဆိုလျင် နှစ်ဦးနှစ်ယောက်လုံးဟာ အားအင်ပြည့်ဝတဲ့ စာနာနားလည်မှု- စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြီးပြည့်စုံ ဝေဆာရင့်ကျက်မှုနှင့် အသိပညာဆိုင်ရာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုကို စိုက်ပျိုးရပါ့မယ်။ ဒီအရာများ မရှိဟုဆိုလျင် ဒါမှမဟုတ် ပျက်ကွက်ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုလျင် သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ ခံစားချက်များ- မှန်မှန်လှုပ်ရှားမှုကင်းတဲ့ စည်းဝါးမကိုက်တဲ့ပုံစံများ ပြီးတော့ ဆူပူထကြွမငြိမ်သက်မှုများက လူ့မှုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ၀ိသေသလက္ခဏာများ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ထဲမှာ တန်းတူတူညီမှုကို ဖန်တီးရပါ့မယ်။ အမျိုးသမီးများရဲ့ အတွင်းစိတ်စွမ်းအားက မြစ်တစ်ခုလို စီးဆင်းပါတယ်။ မြစ်ရဲ့ရေစီးကြောင်းဟာ တောင်တစ်ခုကို တွေ့ဆုံလျင် မြစ်ဟာ အဲဒါကို ဟိုဟိုသည်ည် ကွေ့ပတ်ဝိုက်လျက် စီးဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျောက်သားကျောက်ဆောင်များအစုအဝေးတစ်ခုရှိလျင် မြစ်ဟာ အဲဒါတွေကို ဖြတ်သန်းကျော်လွန် စီးဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အဲဒါရဲ့ အောက် ဒါမှမဟုတ် အဲဒါရဲ့ အပေါ်က စီးဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
အလားတူပါပဲ။ Feminine အရှိန်အ၀ါအင်အားမှာ အဲဒါကို တွေ့ဆုံတဲ့ ဘယ်အတားအဆီးပဲဖြစ်ဖြစ် ကျော်လွှားချိုးနှိမ်လျက် ပန်းတိုင်ဆီသို့ ရွေ့လျားကူးပြောင်းဖို့ လုပ်နိုင်စွမ်းပမာဏ ရှိပါတယ်။ တန်းတူရည်တူဟာ ပါဝါရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အနေအထားရဲ့ပြဿနာတစ်ခု မဟုတ် - ဆိုတာကို သတိရသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဟာ သူတို့ဟာ အသိပညာကို တုံ့ပြန်ဖလှယ်ပေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့ တူညီတဲ့ အရေးပါမှုဖြင့် နှလုံးသားကို ဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အသိညဏ်နှင့်နှလုံးသားကို ရင်းကြားစေ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ လမ်းတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းသင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးအတွက် အတုယူစံနမူနာထားထိုက်သူများ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် တန်းတူရည်တူနှင့် ညီညွတ်မှုက သဘာဝရဲ့အနီးအနားဝန်းကျင်သို့ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
အညတရသို့ လားရောက်ပါ။ ဆုံးခန်းရောက်သည့်တိုင် ပထမဦးဆုံးကို ဆက်လက်တည်ရှိစေပါ။ ကလေးငယ် တစ်ယောက်လို အလွန်တရာကောင်းတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ သည်းခံမှုအသွင်လက္ခဏာ ပြည့်စုံစေပါ။ ဒါဟာ အကောင်းဆုံးလမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ အကျွန်ုပ်တို့ဆီ သယ်ဆောင်လာတဲ့ ဘ၀နဲ့ ဘ၀ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအတွက် အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သဘောထား ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဆက်လက်လေ့လာသင်ကြားနေရပါလိမ့်မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာများဟာ ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းအားလုံးမှာ အရွယ်ရောက်ရင့်ကျက်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ မဟုတ်။ စကြ၀ဠာ ကြီးကျယ်ချင်ကြီးကျယ်သလောက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက် တိုးတက်ဖို့ သင့်တော်လိုက်ဖက်ဖို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်လာရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကြိုတင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ကြပါစို့။ သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အ၀န်းမှာ လူအများရဲ့ဒုက္ခခံစားရခြင်းကို သတိမူပါ။ ပြီးတော့ ကြိုးစားအလုပ်လုပ်ပါ။ လေ့လာသင်ယူဖို့က များစွာပါ။ အကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အရာကို ပြုလုပ်ကြပါစို့။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Monday, February 28, 2011